Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha Nidaamka Qaab-dhismeedka Birta - Warshad Sistem Qaabdhismeedka Shiinaha
Soo bandhigid qayb ka mid ah alaabada shirkadda Iyadoo la horumarinayo sayniska iyo teknolojiyadda, codsiyada dhismayaasha birta ah ee injineernimada dhismaha adduunka ayaa aad iyo aad u ballaaran. Alxanka waa farsamo processing aad muhiim u ah wax soo saarka qaab-dhismeedka steel. Sida laga soo xigtay tirakoobyada ka socda wadamada warshadaha leh, birta la isticmaalo kaliya ka dib markii alxamadu ay xisaabiso qiyaastii 45% ee soo saarista birta sanad kasta. Dhamaadkii 1980-meeyadii, dhismayaasha birta ah ee alxamdu waxay ka koobnaayeen 30% s ...
Hordhac Awoodda farsamada ee shirkadda: Shirkaddu waxay leedahay 7 naqshadeeye, 3 naqshadeeyayaal qaabdhismeed, 2 naqshadeeyayaal naqshad dhismeed, iyo 1 naqshadeeye biyo iyo koronto, oo saddex ka mid ah ay ka shaqeynayeen machadka naqshadeynta muddo ka badan 3 sano. Wershadaha xirfadeed ee u dhigma, nolosha shaqo ee ugu yar ee naqshadeeyayaashu waa shan sano, nolosha ugu badan ee shaqaduna waxay gaadhay 13 sano. Xafiiska waxsoosaarka shirkadu wuxuu leeyahay 2 qaabeeye bir qotodheer; Qeybaha Injineerinka ...